Hello Wardheer"Waan Ku Maqli". - Cakaara News
Hello Wardheer"Waan Ku Maqli".
Wardheer(CakaaraNews) Arbaco oct 30,2013.shaki kuma jiro in guud ahaanba Deegaanka uu ka taabogalay isbedelo horumarineed oo baaxad wayn si siman taasoo xaqiijisay waxqabadka iyo qorshayaasha xawliga ah ee ay Xukuumada maanta jirtaa guntiga u xidhatay.
ka sakow isbedelada horumarineed waxaa iyana dhamaanba 9ka gobol iyo degmooyinka DDSI la hirgaliyay helida isticmaalka aalada casriga ah ee Mobileka oo wax wayn ka tartay Adeegyada isgaadhsiineed ee la xidhiidha dhanka Xidhiidhka bulshada,aalada internetka iyo ganacsigaba.
Hadaba waxaa shalay loo furay helida isticmaalka aalada casriga ah ee Mobileka Gobolka Doolo gaar ahaan Magaalada Wardheer iyo nawaaxigeeda oo ay xukuumadu bilihii ugu danbaysay ay culayska saartay sidii Wardheer looga dhaqangalin lahaa isticmaalka Mobileka.
isku soo wada duuboo magaalada wardheer iyo nawaaxigeeda ayaa laga soo bilaabo shalay aan marna gacanta ka dhigin garaacida mobileda ay waayadanba keeb layuurarka la ahaayeen lana hadlaya Qofba meeshuu ehelkii iyo asxaabtiisaba ku ogaa mahadiyeena Xukuumada iyo DFI.